एका बिहानै बिसाल नग देवताको दर्शन सँगै आजको भाग्य रेखा राशिफल पढ्नुहोस, र भेटी स्वरूप १ शेयर गर्नुहोस, – live 60media
एका बिहानै बिसाल नग देवताको दर्शन सँगै आजको भाग्य रेखा राशिफल पढ्नुहोस, र भेटी स्वरूप १ शेयर गर्नुहोस,
आज २०७७ साउन १८ गते आइतबार । ज्योतिष शास्त्रमा जन्म समय अनुसार फलादेश हुन्छ । सोही अनुसार उनीहरुको दैनिकी कस्तो रहन्छ ? भन्ने विषयमा भविष्यवाणी गरिन्छ । तपाईको आजको दिन कस्तो रहनेछ ? ज्योतिषी एस्ट्रो राजले यस्तो फलादेश गर्नुभएको छ-
← ५५८ वर्ष पछि रक्षावन्धनमा शुभसंयोग, यी राशिको लागि अत्यन्त शुभ
राजेश हमालका अगाडि विजयले देखाए यस्तो चमत्कार, हमाल परे छक्क (भिडियो सहित) →